यसपालिको दशैको टिकाको दिन मन्त्रीहरुले रास्ट्रपतिको हातबाट टिका लगाएको तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल भईरहेको छ । रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगाडी घुडा टेकेर टिका लगाएको तस्बिरको आलोचना र समर्थन दुवै भईरहेको छ । सामान्य नागरीकले मात्र बिरोध गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर यो तस्बिरको आलोचना सेलिब्रेटी देखि नेताहरुले समेत गरिरहेका छन् । सबैको भनाइ पनि छुट्टा छुट्टै छ ।
ट्वीटरमा रेखाले फोटो पोस्ट गर्दै वाह !!!! के भनौ र खै ? भनेर लेखेकी छिन । यो उनको प्रत्यक्ष बिरोध हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
अनि उता करिस्माले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीज्यु यदि आफ्नो पार्टीको नेता भएको कारण मात्रै एक महिला अनि रास्ट्रपतिज्युको अगाडि टीका थाप्न झूक्नु भयेको हो कि यो हजुरले चलाएको संस्कार सबै महिलाहरुको लागि समान हो ? यस्ले निरन्तरता पाउछ कि पाउदैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन । उनले आमाको अगाडी टिका थाप्दा झुक्नु स्वाभाविक भएको भन्दै यो तस्बिरको समर्थन पनि गरेकी छिन ।
यस्तो छ करिस्माको स्टाटस
रास्ट्रपति ज्युको टीका लगाइदिदै गरेको फोटो प्रति विभिन्न टिकाटिप्पनी देखेर केही भनुकी जस्तो लाग्यो। पुर्वाग्रहि भयेर लेखदैछैन
( कम्युनिजम,मार्क्सवदलाई एक्छिन साइडमा राखु मदन भण्डारीको बिचरलाई पनि एकछिन पर राखौ )
मानिसबाट या समुहबाट भयेको हरेक क्रियाकलाप कुनै बिचार अनुसार निर्देशित हुन्छ । टिकाको तयारी त्यो अनुसार भयेको देखिदैन । भनेपछि सायद वाहाहरु त्यो अफ्नो कायम बिचार बाट रूपान्तरित भैसकेको अवस्थाहो ।
अनि रूपान्तर मानिस ,समाज,बिचर ,सबैको स्वभाव हो ।
तर जे बिचर राखे पनि देश र जनताको बिचरको सम्मान हुनुपर्यो , देशको विकास हुनुपर्यो ।
मेरो निजि बिचारमा चाहि रास्ट्रपतिज्यु देशको सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्छ । त्यो अर्थमा आमा सरह हुनुहुन्छ र आमाको अगाडि टीका थाप्दा झूक्नु स्वभाविक रुपमा लिये । हो यो समाजवाद अनुसार ठिक भएन होला । तर मुलुकको चासो राख्ने नागरिकको हिसाबले के लाग्छ भने जबसम्म हाम्रो संस्कृति र विकसित बिज्ञानलाई समरुपमा अगाडि लैजान सकिदैन येस्तै स – साना संकिण बिचरहरुले येसैगरि हामिलाइ आफ्नो वस मा पारेर त्यस्मा व्यस्त पारिरहनेछ । तर मेरो आग्रह केहो भने पार्टी गत स्वार्थ बाट अलिकति माथी उठौ र सोचौ
अनि जिज्ञासा् के भने प्रधानमन्त्रीज्यु येदि आफ्नो पार्टीको नेता भयेको कारण मात्रै एक महिला अनि रास्ट्रपतिज्युको अगाडि टीका थाप्न झूक्नु भयेको हो कि यो हजुरले चलाएको संस्कार सबै महिलाहरुको लागि समान हो । येस्ले निरंतरता पाउछ कि पाउदैन ?